Varume Vaviri Votongerwa Kubatsira Kubvisa Zvirango Zvakatemerwa VaMugabe neAmerica
WASHINGTON — Varume vaviri vemuAmerica vanonzi vapomerwa mhosva zviri pamutemo yekuda kubhadharwa mamiriyoni emadhora kuti vabatsire kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nevamwe muhurumende yavo neAmerica kubva muna 2003 zvibviswe.
VaPrince Asiel Ben Israel naVa C.Gregory Turner vakawanikwa vaine mhosva, vaviri ava vanogona kukandwa mujeri kwemakore ari pakati pemakumi matatu nemashanu nemakumi mana.
Mwedzi wapera, vaviri ava vaimbenge vaziviswa kuti vaizopomerwa mhosva yekutyora mutemo weAmerica nekuyedza kubatsira VaMugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango vachiti vaida mari inopfuura mamiriyoni matatu kuita basa iri.
Dare redzimhosva rinoti VaIsrael naVaTurner vapomerwa zvakare imwe mhosva yekuyedza kushandira vekunze zvisiri pamutemo ine chirango chinosvika makore makumi mashanu, kwozoti yekushanda nevekunze zvisiri pamutemo ine chirango chemakore gumi mujeri.
Vaviri ava vari kupomerwawo zvakare mhosva yekutyora mutemo weInternational Emergency Powers Act, uyo une chirango chinosvika makore maviri mujeri.
VaIsrael voga vapomerwa imwe mhosva yekutyora mutemo weForeign Agents Registration Act ine chirango chemakore mashanu mujeri.
Asi gweta revaviri ava, Amai Viviana Ramirez, vanoti varume ava vanhu vanobatsira zvikuru munharaunda yavagere. Vanotiwo pamutemo weAmerica hapana munhu anonzi ane mhosva asati atongwa pamwe nekuwanikwa aine mhosva yaari kupomerwa.
Vanotiwo vachamira semusambagwena kuona kuti vaviri ava, avo vari kutongwa vachibva kudzimba dzavo, vachenurwa nematare.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye varu mukuru weZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti Zimbabwe inofanira kuita hutongo hwejekerere kuti zvirango zvibviswe kwete kuda kubhadhara vanhu mari dzekuita zviri kunze kwemitemo yedzimwe nyika.